हरिवंशले ल्याए गाईजात्रे गीत
Home Not-to-be-missed हरिवंशले ल्याए गाईजात्रे गीत
काठमाडौं । हास्यव्यंग्य अभिनेता हरिवंश आचार्यले एक समय गाईजात्रा र प्यारोडी गीत निकालेरै त्यसको आम्दानीले घर बनाएका थिए । केही वर्षयता गाईजात्रा गीत निकाल्न नभ्याएका हरिवंशले यसपटक भने गाईजात्रे गीत दर्शकमाझ ल्याएका छन् ।
नजिकिँदै गरेको यो वर्षको गाईजात्रालाई मध्यनजर राख्दै नयाँ गाईजात्रे गीत उनले बिहीबार रिलिज गरेका हुन् । उनले ‘तिमी केको जान्ने…’ गाईजात्रे गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
हरिवंश आचार्यको शब्द, संगीत र स्वरमा यो गीत तयार भएको छ । उनले गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । गीतमा समसामयिक समस्यासँगै राजनीतिक व्यंग्य पनि छ । यो गीतमा भूपालमान सिंहको एरेन्ज रहेको छ ।
यो गीतको भिडियो सागरराज शर्माको निर्देशनमा तयार भएको छ । गीतको भावलाई भिडियोमा राम्ररी उतारिएको छ । गीतको भिडियोमा हरिवंश आचार्य आफैं केन्द्रीय पात्रका रूपमा छन् । भिडियोमा हरिवंशसँगै, शशिकुमार खड्का, किरण तुलाधर, विकास भट्टराई, सुष्मा कार्की, धनराम मुस्कान, अनिल जिसी (बुलेट), सम्राट घिमिरे, दीप शेर्पाली, सुवाश महत, शंकर विसीलगायतको अभिनय छ ।
यो पनि पढ्नुहोस मिस्टर आरजेले ल्याए माकुरी
शशिकिरणको अवधारणामा भिडियो तयार भएको हो । हरि हुमागाईंको छायांकन रहेको गीतको भिडियो सुशील न्यौपानेको सम्पादन छ । गीतलाई पंकज अधिकारीले अंग्रेजी अनुवाद गरेका छन् । गीतको भिडियोमा विक्रम थापाको शृंगार रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा खुलेर गाईजात्रा कार्यक्रम देखाउन नसकिने भएपछि आचार्यले गाईजात्रा गीत ल्याएका हुन् ।
मिस्टर आरजेले ल्याए माकुरी
काठमाडौं । -यापर राजेन्द्र भट्ट (मिस्टर आरजे)को नयाँ गीत ‘माकुरी’ दर्शकमाझ ल्याएका छन् । समीर आचार्य र रोशनी थापाको स्वर रहेको गीतमा मिस्टर आरजेको...
प्रशान्त वली - February 7, 2020
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जोखिम बढ्दै
यो पनि पढ्नुहोस चौथो टेस्ट भारतको पक्षमा
घटना १ काठमाडौं, मैत्रीनगर बस्ने...
संसद विघटनको बिरोधमा जसपाले जलायो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला
प्रदेश २ एम के माझी - December 25, 2020
सप्तरी । असंबैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको बिरोधमा शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सप्तरीले राजविराजमा बिरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गरेका छन्...
मेयर साहको परीक्षा अनुगमन विवादित बन्दै
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - March 17, 2020
ज्नकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहद्वारा परीक्षामा भइरहेको अनुगमनको चारैतिर आलोचना हुँदा पनि उनले अनुगमन कार्य जारी राखेका छन् । ८ कक्षाको अहिले...
मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - November 6, 2020
काठमाडौं । हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको शशस्त्र प्रहरी अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रवीण नेपालले कोरोनाका कारण गम्भीर बिरामी...
बिना पास मन्त्रीको गाडी रोडमा सरर…
प्रदेश २ रमेश तिमलसिना - August 10, 2020
रौतहट । प्रदेश नं. २ का भौतिक पुर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलको गाडी सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा तोड्दै राजमार्गमा गुडेपछि सोमबार केही बेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको...
भर्खरै ईश्वर तामाङ - August 5, 2020
मुम्बई । कोरोनाका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्दै विवाहमा ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरु सामिल हुन नपाउने भएपछि बलिउड अभिनेता वरुण धवन अहिले दुःखी...
युवराज विष्ट - January 17, 2021
यो पनि पढ्नुहोस अनि कोमललाई विवाह गर्ने चाहना हरायो